Famaritana indray ny Geo-Engineering Concept - Geofumadas
Miaina fotoana manokana isika amin'ny fihaonan'ny fifehezana izay efa an-taonany maro no nizara. Fanadihadiana, famolavolana maritrano, sary an-tsipika, famolavolana firafitra, fandrindrana, fananganana, marketing. Mba hanomezana ohatra ny amin'ny ony nentim-paharazana; tsipika ho an'ny tetikasa tsotra, miverimberina ary sarotra fehezina arakaraka ny haben'ny tetikasa.
Androany, nahagaga fa nampiditra renirano eo anelanelan'ireo taranja ireo isika, izay mihoatra ny haitao fitantanana data, mizara fizotrany. Toy izany dia sarotra ny mamantatra hoe aiza no manomboka ny asan'ny iray ary ny iray hafa; aiza no mifarana ny fandefasana vaovao, rehefa maty ny kinovan'ny maodely iray, rehefa hatsahatra ilay tetikasa.
Geo-injeniera: mila fe-potoana vaovao isika.
Raha toa ka manao batisa ny fizotran'ny fizotran-javatra, avy amin'ny fahazoana mombamomba ny tetikasa iray ao amin'ny tontolon'ny geospatial hametrahana azy io ho fampandehanana ny tanjon'izany, dia ho sahy hiantso azy isika. Geo-injeniera. Na dia nampifandraisina tamin'ny siansa manokana teto an-tany aza io teny io, dia azo antoka fa tsy amin'ny fotoana fanajana fivoriambe isika; bebe kokoa raha heverintsika fa ny geo-location dia lasa mpiorina ao amin'ny orinasa rehetra, ary ny fahitana an'ny Ambaratonga BIM Manery antsika hieritreritra fa ny haben'ny Architecture, injeniera ary ny fanamboarana (AEC) dia hianjera raha toa ka jerentsika ny fetran'ny dingana manaraka, dia ny Operation. Ny fieritreretana amin'ny sehatra midadasika kokoa dia mitaky ny fiheverana ny fiantraikan'ny fanaovana nomerika an'ireo fomba ankehitriny, izay mihoatra ny fananganana fotodrafitrasa ary manitatra any amin'ireo orinasa izay tsy manana fisolo tena ara-batana, izay tsy mifandray fotsiny eo amin'ny Fandefasana angon-drakitra mifandimby fa amin'ny fampifangaroana ny fizotrany.
Miaraka amin'ity andiany ity Tao amin'ny gazety dia nandray ny teny hoe Geo-Engineering izahay.
Ny sakelin'ny foto-kevitra Geo-injeniera.
Nandritra ny fotoana elaela, ny tetik'asa dia hita amin'ny dingana samihafa satria miafara amin'ny tenany ny mpanelanelana. Androany, miaina amin'ny fotoana iray isika, amin'ny lafiny iray, ny fampahalalana dia ny vola fifanakalozana hatramin'ny fisamborana azy hatramin'ny fahazoana azy; Saingy ny fampandehanana mahomby koa dia mameno ity tontolon-kevitra ity hanovana ity fahafaha-tahiry ity ho fananana afaka miteraka fahombiazana lehibe kokoa sy portfolio-manoloana ny filan'ny tsena.
Isika dia milaza ny momba ny rojo vy mandrafitra izay manome lanja ny asan'ny olombelona ao amin'ny macroprocess fa, ankoatry ny maha-injeniera dia resaka raharaham-barotra.
Dingana fanatanterahana - ny modely izay -taloha- Manova an'izay ataontsika izany.
Raha handeha hiresaka momba ireo dingana isika, dia tsy maintsy hiresaka momba ny rojom-bidy, ny fanatsarana miankina amin'ilay mpampiasa farany, ny fanavaozana ary hikatsahana fahombiazana mba hahombiazan'ny fampiasam-bola.
Ireo fizotran-javatra mifototra amin'ny Management Management. Ny ankamaroan'ny ezaka voalohany tamin'ny taona 90, niaraka tamin'ny fahatongavan'ny solosaina, dia ny fifehezana tsara ny fampahalalana. Amin'ny lafiny iray, nitady ny hampihenana ny fampiasana endrika ara-batana sy ny fampiharana tombony amin'ny computational ho an'ny kajy sarotra; Noho izany, ny CAD dia tsy voatery hanova ny dingana amin'ny voalohany, fa kosa hitarika azy ireo amin'ny fanaraha-maso nomerika; manohiza manao saika hitovy, mirakitra fampahalalana mitovy, manararaotra ny zava-misy fa azo ampiasaina indray izao ny haino aman-jery. Ny baiko offset dia manolo ny fitsipika mifanitsy, ny ortho-snap ny kianja 3 degre, ny boriborintany ny kompà, ny manaparitaka ny maodely famafana marina ary toy izany hatrany no nanaovanay ilay fitsambikinana fa tsy mora na kely ny marina, mieritreritra fotsiny ny ny tombony amin'ny sosona izay amin'ny fotoana hafa dia midika fa manadihady ny drafitra fananganana hiasa amin'ny drafitra fananganana na fantson-drano. Saingy tonga ny fotoana nanatanterahana ny tanjony tamin'ny lafiny roa ny CAD; nanjary nandreraka indrindra ho an'ny fizarana hazo fijaliana, ny tarehy ary ny fampisehoana pseudo-telo-habe; Toy izao no nisehoan'ny maodely 2D talohan'ny niantsoantsika azy io hoe BIM, nanatsorana ireo fanazaran-tena ireo ary nanova betsaka ny zavatra nataontsika tamin'ny CAD XNUMXD.
... mazava ho azy, ny fitantanana 3D tamin'izany fotoana izany dia nifarana tamin'ny static renders izay tratran'ny faharetana vitsivitsy noho ny loharanom-pitaovana voafetra amin'ny fitaovana ary tsy ny loko maro loko.
Ireo mpamatsy rindrambaiko lehibe ho an'ny indostria AEC dia nampiova ny fiasan'izy ireo nifanaraka tamin'ireny tongony lehibe ireny, izay misy ifandraisany amin'ny fahaizan'ny fitaovana sy ny fananganana ataon'ny mpampiasa. Mandra-pahatongan'ny fotoana iray izay tsy fahampian'ny fitantanana fampahalalam-baovao io, mihoatra ny endrika fanondranana, ny angon-drakitra mifamatotra ary ny fampidirana referaozy izay voakasik'io fironana ara-tantara io mifototra amin'ny departemanta.
Tantara kely. Na dia eo amin'ny sehatry ny injeniera indostrialy aza ny fikatsahana fahombiazana dia manana tantara bebe kokoa, ny fananganana teknolojia ny Operation Management ao amin'ny tontolon'ny AEC dia tara ary nifototra tamin'ny conjuncure; lafin-javatra izay sarotra entina ankehitriny raha tsy nandray anjara tamin'izany fotoana izany isika. Hetsika maro no tonga tamin'ny fitopololahy, nahazo tanjaka tamin'ny taona valopolo taona izy ireo tamin'ny fahatongavan'ilay solosaina manokana izay, afaka ny ho eo amin'ny birao rehetra, manampy amin'ny famolavolana fanampiana amin'ny solosaina ny mety hisian'ny tahiry, sary amin'ny raster, tambajotra LAN anatiny ary izany mety hisian'ny mampifandray fifehezana mifandraika amin'izany. Ireto misy vahaolana mitsivalana ho an'ny sombin-tsolika toy ny fandrefesana, famolavolana maritrano, famolavolana rafitra, tombana amin'ny tetibola, fanaraha-maso ny lisitra, drafitra fananganana; rehetra miaraka amin'ny fetran'ny teknolojia izay tsy ampy amin'ny fampidirana mahomby. Ankoatr'izay, ny fenitra dia saika tsy nisy, ireo mpamatsy vahaolana dia nijaly tamin'ny endrika fitahirizana tsy dia tsara loatra ary mazava ho azy fa misy ny fanoherana ny fanovana ataon'ny indostria noho ny zava-misy fa sarotra ny mivarotra ny vidin'ny fananganana amin'ny fitoviana mitovy amin'ny fahombiazana sy fahombiazan'ny vidiny.
Miala amin'ity dingana voalohany amin'ny fizarana vaovao ity dia mitaky singa vaovao. Angamba ny laharana lehibe indrindra dia ny fahamatoran'ny Internet, izay, ankoatry ny fanomezana antsika fahafaha-mandefa mailaka sy hitety ireo pejin-tranonkala tsy miova, dia nanokatra ny varavarana hiaraha-miasa. Ireo vondrom-piarahamonina nifandray tamin'ny vanim-potoana web 2.0 dia nanery ny fanarahana fenitra, avy amin'ny fandraisana andraikitra loharano misokatra fa amin'izao fotoana izao dia tsy miraharaha intsony izy ireo fa efa hitan'ny maso vaovao amin'ny orinasa tsy miankina. Ny fitsipi-pifehezana GIS dia iray amin'ireo ohatra tsara indrindra, nanohitra ny toe-javatra rehetra tamin'ny fotoana maro mba hihoarana ny rindrambaiko fananana; trosa izay mbola tsy azo zahana amin'ny indostrian'ny CAD-BIM hatreto. Ny zavatra dia tsy maintsy nilatsaka tamin'ny lanjan'izy ireo talohan'ny fahamatoran'ny eritreritra ary tsy isalasalana fa ny fiovana eo amin'ny tsenan'ny asa B2B amin'ny alàlan'ny fanatontoloana mifototra amin'ny fifandraisana.
Omaly dia nanakimpy ny masontsika izahay ary androany dia nifoha izahay nahita ny fironana intrinsic toy ny geo-toerana no lasa ary vokatr'izany dia tsy fiovana eo amin'ny indostrian'ny digitalization akory, fa fiovana tsy azo ihodivirana amin'ny tsenan'ny famoronana sy ny famokarana.
Ireo fomba fiasa mifototra amin'ny fitantanana Operation. Ny fomba fiasa dia mitarika antsika hanapaka ny paradigma amin'ny fizarana fifehezana amin'ny fomban'ny departemantan'ny birao misaraka. Ny ekipa mpandinika dia nanjary nanana fahaiza-manao fampisehoana sy fanaovana nomerika, ny mpanao drafitra dia avy amin'ny fisarihana tsipika tsotra ka hatramin'ny maodelin-javatra; ireo mpanao mari-trano sy injeniera dia nanjakazaka tamin'ny indostrian'ny geospatial izay nanome tahirin-kevitra bebe kokoa noho ny toerana misy anao. Izany dia nanova ny fifantohana avy amin'ny fanaterana antontan-taratasy kely ho amin'ny fizotrany izay ny maodely fandefasana modely dia tsy misy afa-tsy ny fehin'ny rakitra iray izay omena eo anelanelan'ny fifehezana ny fandrefesana, ny injeniera sivily, ny maritrano, ny injeniera indostrialy, ny marketing ary ny geomatika.
Modeling. Tsy mora ny mieritreritra modely, saingy nitranga izany. Androany dia tsy sarotra ny mahatakatra fa ny tany iray, tetezana, tranobe, orinasa indostrialy na lalamby dia mitovy. Zavatra iray teraka, maniry, mamokatra vokatra ary ho faty indray andro any.
BIM no foto-kevitra maharitra ela indrindra nananan'ny indostrian'ny Geo-engineering. Angamba ny fandraisany anjara lehibe indrindra amin'ny làlana fanaingoana ho fifandanjana eo amin'ny famoronana tsy miankina amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny sehatry ny haitao sy ny fangatahana vahaolana tadiavin'ny mpampiasa orinasa tsy miankina sy governemanta hanome tolotra tsara kokoa na hamokatra vokatra tsara kokoa miaraka amin'ny loharano natolotry ny orinasa. Ny fiheverana ny BIM, na dia hitan'ny maro aza amin'ny fampiharana azy amin'ny fotodrafitrasa ara-batana, azo antoka fa manana habaka bebe kokoa rehefa mieritreritra ny hubs BIM hitoe-jana amin'ny ambaratonga avo kokoa isika, izay ahitàna ny fifehezana ny fizotran'ny tena fiainana misy fifehezana toy ny fanabeazana, famatsiam-bola, fiarovana, sns.
Ny rojehan'ny sanda - miainga amin'ny fampahalalana mankany amin'ny fandidiana.
Androany, ny vahaolana dia tsy mifantoka amin'ny famaliana famaizana manokana. Fitaovana tokana ho an'ny lahasa toa ny maodely toposurface na ny fanaovana teti-bola no nampihena ny antso avo raha toa ka tsy azo ampidirina anaty ony, any ambany, na any amin'ny làlambe. Izany no antony manosika ireo orinasa mitarika eo amin'ny indostria hanome vahaolana izay mamaha amin'ny ankapobeny ny filàna amin'ny sehatra iray manontolo, ao anaty rojom-bidy izay sarotra zaraina.
Ity gadra ity dia ahitana ireo dingana izay manatanteraka tsikelikely ny tanjona mifameno, manapaka ny filaharana andalana ary mampirongatra ny fahombiazana amin'ny fotoana, ny vidiny ary ny traceability; singa tsy azo ihodivirana ireo modely amin'ny kalitao ankehitriny.
Ny foto-kevitra Geo-injeniera dia manolotra filaharam-potoana, manomboka amin'ny fiorenan'ny maodelin'ny orinasa hatramin'ny famokarana ny valiny andrasana. Amin'ireo dingana samihafa ireo dia mihena miandalana ny laharam-pahamehana amin'ny fitantanana ny fampahalalana mandra-pitantanana ny asa; ary raha toa ka mampihatra fitaovana vaovao ny fanavaozana dia azo atao ny manamora ny dingana tsy manampy lanja intsony. Ohatra:
Ny fanaovana pirinty ny drafitra dia mijanona ho zava-dehibe hatramin'izao fotoana ahafahana an-tsary azy ireo amin'ny fitaovana azo ampiharina, toy ny takelaka iray na Hololens.
Ny fampahafantarana ireo vatan-tany mifandraika amin'ny lojika sarintany quadrant dia tsy manome lanja ny modely izay tsy ho vita pirinty, izay hiova tsy tapaka ary mitaky fangatahana anarana tsy mifandray amin'ny toetra tsy ara-batana toa ny tanàn-dehibe / ambanivohitra na fananan-tany. ho an'ny faritra administratif.
Amin'ity fantsom-pifandraisana ity dia rehefa hitan'ny mpampiasa ny sandan'ny fahafahany mampiasa ny fitaovana anaovany fandrefesana tsy hoe hisambotra data eny an-tsaha fotsiny, fa hanome modely alohan'ny hahatongavany any amin'ny birao, amin'ny fanekena fa fampidirana tsotra andro vitsivitsy aorian'izay dia horaisiny miaraka amin'ny endrika izay tsy maintsy eritreretinao amin'ny fananganana azy. Ny tranokala izay itehirizana ny valin'ny saha dia tsy manampy lanja intsony, raha mbola misy rehefa ilaina sy ny fibaikoana ny fanovana azy; Noho izany, ny fandrindrana xyz voasambotra teny an-tsaha dia singa iray fotsiny amin'ny rahona teboka izay nijanona tsy ho vokatra intsony ary lasa fidirana, fidirana hafa, vokatra farany hita miharihary amin'ny rojo. Izany no antony tsy ahatonta intsony ny drafitra miaraka amin'ny tsipika contour-ny, satria tsy manampy lanja amin'ny alàlan'ny fihenan-danja avy amin'ny vokatra ka ampidirin'ny maodely volavolan-kevitra momba ny tranobe, izay fampiasa iray hafa ho an'ny maodely maritrano, izay hanana maodely ara-drafitra, a maodely elektromekanika, maodely fandrindrana fananganana. Rehetra, amin'ny maha karazana kambana nomerika izay hiafara amin'ny maodelim-piasan'ny trano efa namboarina; ny zavatra nandrasan'ny mpanjifa sy ny mpamatsy vola azy tamin'ny voalohany.
Ny fandraisan'anjaran'ny rojo dia eo amin'ny sanda fanampiny amin'ny maodelin-kevitra voalohany, amin'ny dingana samihafa amin'ny fisamborana, modely, famolavolana, fananganana ary farany fitantanana ny fananana farany. Ireo dingana izay tsy voatery ho Linear, ary izay ny indostria AEC (Architecture, Engineering, Construction) dia mitaky rohy misy eo amin'ny maodelin'ny zavatra ara-batana toy ny tany na fotodrafitrasa misy singa tsy ara-batana; olona, ​​orinasa, ary ny fifandraisana isan'andro amin'ny fisoratana anarana amin'ny tany misy, ny fitantanana, ny dokam-barotra ary ny famindrana ny fananana
Fitantanana fampahalalana + fitantanana asa. Tsy azo ihodivirana ny fizotran'ndrindra mandingana.
Ny haavon'ny fahamatorana sy ny fifamadihana eo amin'ny famolavolana ny mombamomba ny fananganana (BIM) miaraka amin'ny Kitapom-pamokarana Production (PLM), dia ahitàna toe-javatra vaovao, izay narafitra faha-efatra an'ny Revolisiona Ara-indostria (4IR).
IoT - 4iR - 5G - Tanàn-dehibe - Digital kambana - iA - VR - Blockchain.
Ny vokam-pifidianana vaovao momba ny fiovam-po BIM + PLM.
Androany dia betsaka ny fandraisana andraikitra mitarika teny izay tsy maintsy ianarantsika isan'andro, vokatry ny hetsika BIM + PLM akaiky kokoa hatrany. Ireo teny ireo dia misy ny Internet of Things (IoT), Smart Cities, Digital Twins, 5G, Artificence Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), mba hitonona vitsivitsy. Mampametra-panontaniana hoe firy amin'ireto singa ireto no hanjavona satria tsy ampy clichés, mieritreritra amin'ny fomba fijery tena izy ny zavatra antenaina ary manilika ny onja ara-potoana amin'ny horonantsary taorian'ny apokaliptika izay manome koa ny sary momba ny halehiben'ny mety ho ... ary araka ny filazan'i Hollywood, saika miharan-doza hatrany.
Geo-injeniera. Fanapahan-kevitra miorina amin'ny fizotran'ny fitantanana ny toe-javatra teratany.
Ny infographic dia manolotra fahitana manerantany momba ny fikajiana izay tsy mbola manana fe-potoana manokana, izay raha ny fijerinay dia antsoina hoe Geo-Engineering izahay. Ity, ankoatry ny hafa, dia nampiasaina ho tenifototra vonjimaika amin'ny hetsika ataon'ny orinasa mitarika eo amin'ny sehatry ny indostria, saingy araka ny filazan'ny fampidiran-dresaka nataonay, tsy mbola nanana anarana mendrika izany.
Ity infographic ity dia manandrana mampiseho zavatra izay tsy mora raisina am-pahatsorana, tsy hadika kokoa izany. Raha dinihintsika ny laharam-pahamehan'ny indostria samihafa izay transversal mandritra ny tsingerina, na dia misy ny masonkarena fanombanana samihafa aza. Amin'izany fomba izany, azontsika atao ny mamantatra fa, na dia foto-kevitra ankapobeny aza ny maodely dia azontsika atao ny mihevitra fa ny fananganana azy dia nandalo ity filaharana manaraka ity:
Geospatial Adoption - CAD Masification - 3D Modeling - BIM Conceptualization - Digital Recinsing Recinsling - Smart City Integrasi.
Avy amin'ny optika ny làlan-tsarobidin'ny modely, isika dia mahita ny fiandrasan'ireo mpampiasa manatona tsikelikely ny zava-misy, farafaharatsiny amin'ny fampanantenana toy izao manaraka izao:
1D - Fitantanana rakitra amin'ny endrika dizitaly
2D - Ny fampiharana ny endrika dizitaly manolo ny drafitra vita pirinty,
3D - Ny maodely telolafy telo sy ny toerany geo-toerana misy azy,
4D - fanovana ara-tantara amin'ny fotoana voafehy,
5D - Ny fidirana amin'ny lafiny toekarena amin'ny vokatry ny singa ananan'ireo singa,
6D - Ny fitantanana ny tsingerin'ny fiainana an'ny zavatra modely, ampidirina amin'ny asan'ny tontolony amin'ny tena fotoana.
Tsy isalasalana fa, tamin'ny fiheverana taloha, misy fomba fijery samihafa, indrindra satria ny fampiharana ny maodely dia miangona fa tsy manokana. Ny vina natolotra dia fomba iray ihany handikana ny fomba fijery ny tombontsoa izay hitan'ny mpampiasa rehefa nandray ny fivoarana ara-teknolojia amin'ny indostria izahay; na ity injeniera sivily, maritrano, injenieran'ny indostria, cadastre, cartographique ... na ny fanangonana ireo rehetra ireo ao anaty dingana mitambatra.
Farany, ny infografika dia mampiseho ny fandraisana anjara izay nentin'ny fifehezana ho an'ny fenitra sy ny fananganana ny dizitaly amin'ny fomba andavanandron'ny olombelona.
GIS - CAD - BIM - kambana nomerika - Tanàn-dehibe
Amin'ny lafiny iray, ireo teny ireo dia nanome ny laharam-pahamehana ny ezaka fanavaozana tarihin'ny olona, ​​orinasa, governemanta ary ambonin'ireo akademia rehetra izay nitarika ny zavatra hitantsika ankehitriny miaraka amin'ny fifehezana matotra tanteraka toy ny Geographic Information Systems (GIS), ny fandraisana anjara nisolo tena Computer Aided Design (CAD), mivoatra mankany amin'ny BIM amin'izao fotoana izao, miaraka amina fanamby roa noho ny fanarahana fenitra saingy miaraka amin'ny lalana voatanisa mazava tsara amin'ny ambaratonga 5 amin'ny fahamatorana (Ambaratonga BIM).
Ny fironana sasany ao amin'ny spectrum geo-engineering dia iharan'ny fanerena ankehitriny hametraka ny hevitra Digital Twins sy Smart Cities; ny voalohany indrindra ho toy ny mavitrika hanafainganana ny nomerika eo ambanin'ny lozisialy ny fampiharana ny fenitra miasa; ny faharoa kosa dia sehatry ny fampiharana mety. Ny Smart Cities dia manitatra ny fahitana amin'ireo fifehezana maro izay azo ampidirina ao anatin'ny fahitana ny tokony hataon'ny zanak'olombelona amin'ny tontolo ekolojika, fitantanana ny lafiny toy ny rano, angovo, fidiovana, sakafo, fivezivezena, kolontsaina, fiaraha-miaina, fotodrafitrasa ary toekarena.
Zava-dehibe ny fiantraikany amin'ny mpamatsy vahaolana, amin'ny sehatry ny indostria AEC, ny rindrambaiko, ny fitaovana ary ny serivisy dia tsy maintsy manaraka ny tsenan'ny mpampiasa izay manantena zavatra betsaka kokoa noho ny sarintany nolokoina sy ny sary mahasarika ny maso. Ny ady dia eo an-joron'ireo goavambe toa an'i Hexagon, Trimble miaraka amina maodely mitovy amin'ny tsena azony tao anatin'ny taona vitsivitsy; AutoDesk + Esri amin'ny fikatsahana lakile mazika izay mampifandray ireo ampahan'ireo mpampiasa azy, Bentley miaraka amin'ny tetikadiny manakorontana izay misy fiaraha-miasa mifameno amin'i Siemens, Microsoft ary Topcon.
Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy mitovy ny fitsipiky ny lalao; Tsy vahaolana ho an'ny mpandrefy, injeniera sivily na arsitek. Manantena vahaolana feno ny mpampiasa ankehitriny, mifantoka amin'ny fizotrany fa tsy amin'ny rakitra fampahalalana; miaraka amin'ny fahalalahana bebe kokoa amin'ny fampifanarahana manokana, miaraka amin'ireo fampiharana azo ampiasaina indray mandritra ny onja, tsy azo ifanarahana ary ambonin'izany rehetra izany amin'ny maodely mitovy izay manohana ny fampidirana ireo tetikasa samihafa.
Tsy isalasalana fa miaina fotoana mahafinaritra isika. Ireo taranaka vaovao dia tsy hanana tombontsoa hahita ny fahaterahana sy ny famaranana ny tsingerin'ity sokajy Geo-injeniera ity. Tsy ho fantatrao ny tena nampientanentana azy ny nihazakazaka AutoCAD tamina lahasa tokana 80-286, ny faharetana niandry ny hisian'ny sosona drafitra maritrano, miaraka amin'ny famoizam-po tsy hahafahana manatanteraka ny Lotus 123 izay nanananay ny takelaka fandaniam-bola. efijery mainty sy litera volomboasary. Tsy ho azon'izy ireo fantarina ny adrenalin'ilay fahitana voalohany amin'ny sarintany cadastral iray mihaza amin'ny raster binary any Microstation, mihazakazaka amin'ny Intergraph VAX. Mazava ho azy, tsia, tsy hanao izany izy ireo.
Tsy misy gaga be dia hahita zavatra maro hafa izy ireo. Ny fitsapana ny iray amin'ireo prototypes voalohany an'ny Hololens tao Amsterdam taona vitsivitsy lasa izay, dia nitondra ny ampahany tamin'io fahatsapana io tamin'ny fihaonako voalohany tamin'ny sehatra CAD. Mazava ho azy fa tsy raharahaintsika ny haben'ny revolisiona indostrialy fahefatra, izay ahitantsika izao hevitra izao, manavao ho antsika fa taloha ihany aloha izay hilazana azy hifanaraka amin'ny tontolo vaovao izay ny fahaizana mandinika dia ho sarobidy kokoa noho ny diplaoma sy taona akademika. avy amin'ny zavatra niainana.
Ny azo antoka dia ho tonga aloha kokoa noho ny nantenaintsika.
Previous Post«Previous Tsy misy faritra jamba intsony miaraka amin'ny asany
Next Post Vaovao Geo-Engineering - Taona amin'ny fotodrafitrasa - YII2019manaraka »